सम्झनामा माघ १९ – Pahilo Page
१९ माघ २०७५, शनिबार २३:१२ 856 पटक हेरिएको
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को शाही कूपछि तैं चूप, मै चूपको स्थिति सिर्जना भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ त्यस्तो संस्था थियो जसले पहिलोपटक ज्ञानेन्द्रको कदमलाई शाही कूको संज्ञा दिँदै त्यसका विरुद्ध सडकमा ओर्लियो । कतिपयले ७ राजनीतिक दलपछि महासंघलाई आठौं दल पनि भनेका थिए । महासंघका तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीलाई सेनाले पक्राउ गरी २२ दिन थुनेको थियो । उनलाई ठूलो दवावले गर्दा २२ दिनपछि थुनामुक्त गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उनै तत्कालीन महासचिव विष्णु निष्ठुरीको संस्मरण । हामीले यो आलेख नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको मुखपत्र पत्रकारिताबाट साभार गरेका हौं ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नागरिक अधिकारविरुद्ध ‘कू’ गरे १९ माघ २०६१ मा । यसअघि असोज १८ पछि पाँच दलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखी जारी राखेको विरोध कार्यक्रमहरु पनि रोकियो । नेताहरु कोही नजरबन्दमा परे, कोही भने भूमिगत भए । शाही ‘कू’को विरोध गर्ने कोही भएनन् ।
त्यसपछि पेशागत संगठनहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघले नै जोखिम उठायो र प्रेसविरुद्ध लगाइएका सबै बन्देज हटाउन माग गर्दै विरोध कार्यक्रमहरु सुरु गर्यो । वातावरण सकारात्मक बन्दै गएपछि बिस्तारै अरु क्षेत्र र निकै पछि राजनीतिक दलहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । अन्ततः
आन्दोलनको नेतृत्व दलहरुले गरे, सफल पनि भयो, परिणाम हामीसमक्ष छँदैछ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हुँदा म नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति थिएँ । ‘कू’ भएका बेला म महासंघको
महासचिव थिएँ ।
इतिहासकै कालो दिनका रुपमा २०६१ माघ १९ दर्ज हुनपुग्यो, जुन दिन राजाले जनतामा निहित रहेको अधिकार खोसेर निरंकुशता लादेका थिए । राजाले मुलुकमा ‘कू’ को घोषणा गरेलगत्तै सबै
फोनहरु ‘सिज’ गरियो । तत्कालै सबै सञ्चारमाध्यमहरुमा पुगें । कान्तिपुर पुग्दा त्यहाँ सेना तैनाथ भएर बसेको थियो । साथीहरु त्रसित थिए । उनीहरुको व्यवहार निकै फरक खालको थियो । सेनाको अगाडि डरले भयभित हुँदै काम गरिरहेका थिए । त्यसपछि म नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यालय परिसर पुगें । त्यहाँ पनि कोही भेटिएनन् । सबैतिर सुनसान थियो । मानिसहरु बासस्थानबाट बाहिर निस्कन आँट गरिरहेका थिएनन् ।
सबै सञ्चारमाध्यममा सेना उपस्थित थियो । पत्रकार रहनुपर्ने ठाउँमा सेना उभिएर समाचारमाथि सेन्सर गरिरहेको थियो ‘यो राख्ने, त्यो नराख्ने’ भन्दै । टेलिभिजनहरुमा ‘कुन दृश्य देखाउने कुन नदेखाउने’ भन्दै तैनाथ सेनाको टोलीले पत्रकार साथीहरुमाथि जबर्जस्त आदेश बर्षाउँदै थियो । रिपोर्टस क्लब पुग्दा त्यहाँ धेरै मानिसहरु भेला भएका थिए । केही पत्रकार थिए भने
अधिकांश सरकारी गुप्तचर थिए ।
उनीहरुले ‘कू’का बारेमा मलाई बोल्न आग्रह गरे । क्लब पुग्नुअघि सञ्चारमाध्यम घुम्दा
देखिएका दृश्यहरुले मेरो आक्रोशको सीमा नाघिसकेकाले मैले त्यो फोरममा उभिएर भनिदिएँ ‘राजाले नागरिक अधिकार विरुद्धमा ‘कू’ गरे । मिडियामा सेना पठाए । यो ज्यादति हो । यहाँ दरबारका सुराकी कोही हुनुहुन्छ भने दरबारमा खबर पु¥याइदिनू राजाले गलत काम गरे ।’
१९ गते त्यत्तिकै बित्यो । महासंघका सभापति तारानाथ दाहाललाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेको थिएँ । तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन । २० गते पनि सम्पर्क हुन सकेन । मिडिया, पत्रकारमात्र होइन सबैतिर त्रास थियो । मानिस एकै ठाउँ भेला भएर बस्न डराउँथे । बाहिर चारैतिर सेनाको बटालियन घुमेरहेको हुन्थ्यो । २१ गते बल्ल–तल्ल उपलब्ध भएका केही साथीहरु जम्मा भएर छलफल ग¥यौं र तत्कालीन शाही कदमलाई नागरिक अधिकारविरुद्धको ‘कू’ भन्ने शब्द राखेर वक्तव्य निकाल्यौं । हाम्रो वक्तब्यलाई बीबीसीले पूर्णरुपमा प्रकाशन प्रसारण ग¥यो । त्यतिबेलासम्म राजनीतिक दलहरुले पनि नागरिक अधिकारविरुद्धको ‘कू’ शब्द प्रयोग गर्ने आँट गरिरहेका थिएनन् । बरु, नेपाल बार एसोसिएसनले हाम्रो वक्तव्यको समर्थन गर्दै सोही आशयमा रहेर शाही ‘कू विरुद्ध धारणा सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसैदिन बेलुका म खाना खाएर सुत्न लागेको थिएँ । केही मान्छे आएर ‘विष्णु दाइ’ भनेर बोलाए । रातको १० बजेको थियो । मैले रेस्पोन्स गरें, कोठामै बोलाएँ । उनीहरु आए । केही मिनेट नबस्दै माथिबाट आदेश भएकाले मलाई गिरफ्तार गर्न आएको कुरा बताए । छोरो त्यतिबेला एसएलसीको तयारी गर्दै थियो । होस्टलबाट एकरात बस्न शुक्रबार घर आएको थियो । मैले यिनीहरु मलाई नलिई फर्किँदैनन् भन्ने प्रष्ट भएपछि छोरा र श्रीमतीलाई सम्झाएँ, ‘तिमीहरु नआत्तिई बस्नू । मलाई केही
त्यसपछि फेरि मेरो आँखामा पट्टी बाँधियो अलि पर नीलो भ्यान उभिएको धमिलो दृश्य देखें, सोचें अन्तै लगेर जेलमा राख्ने भएछन् । भ्यानमा चढें । भ्यान त्यहीं वरिपरि तीन फन्को घुमाए । शायद मैले राति बसेको ठाउँ थाहा पाउन नसकँु भन्ने उनीहरुको प्रयास थियो होला । तर एकजना प्रहरीले त्यही दिन अपरान्ह कुरा खुस्काइहाले । मलाई भद्रकाली ब्यारेकमा राखिएको रहेछ । बिहान मन्दिरमा बेस्सरी घण्टी बजेको थियो तर मैले त्यति अन्दाज गर्न सकेको थिएन ।
मलाई सिंहदरबार वडा प्रहरी कार्यालयको एउटा सिंगो हिरासतमा लगेर राखियो । त्यहाँ पुग्दा अर्को कोठामा बीस–तीस जना विद्यार्थीहरुलाई एउटै कोठामा कोचेर राखिएको थियो । माघको जाडो लुगाफाटो केही थिएन । त्यसपछि करिब ६ दिनसम्म त्यही राखियो । परिवारलाई म कहाँ छु भन्ने कुरा अत्तोपत्तो थाहा थिएन । बाहिर के भएछ भने, बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको पहलमा बार एशोसिएसनले नै मेरो रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेको रहेछ । थापा बारको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको
स्पेशल मिसन आयो । उनीहरुले सेनाप्रमुख, सभामुख, सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतकासँग भेट गरेर मेरा बारेमा कुरा गरेछन् । त्यसबेला मेरा कारणले राज्य संयन्त्रहरुमा ठूलै तनाव भएछ । त्यसपछि छैठौं दिन मलाई परिवारसँग भेट गर्न दिइयो । बाइस दिनपछि मलाई थुनामुक्त गरियो ।
त्यसपछिका वर्षहरु हाम्रा राजनीतिक दलहरुका असक्षमता, अदूरदर्शिता, अकर्मण्यताका कारण हामी अरुका एजेण्डा पूरा गर्ने भरौटे हुन पुग्यौं । जस्तै, धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा छलछाम गरेर पछि आएको हो । किन ल्याएको ? जुन देशले वर्षौंदेखि इस्लाम धर्म मान्ने बन्धुहरुलाई सरकारी खर्चबाट मक्कामदिना पठाउँछ, सामाजिक रुपमा यति सहिष्णु मुलुकमा धर्म निरपेक्षताको के आवश्यकता थियो ? यो नेपालीलाई नै प्रयोग गरेर भएको अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो तर एक न एक दिन यसको पर्दाफास अवश्य होला ।
(कुराकानीमा आधारित । निष्ठुरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन्)